my kitchen my life: fattoush
sumac or samak powder
This isakind of Arabic salad. Ingredients might different. 'Cause depend on seasonal. produce.
sumac powder or samak
First , we've to wash all vegs in cold water. Then slice cucumber,red raddish and put it inabowl. Add tomato small dice,zeta leaf,watercress , mint leaf and Julienne cut of romaine leaf . And then taste for salt , sumac powder and lemon garlic dressing. Mix all ingredients gently and softly. On top , just put fried Arabic bread.
ဖာသွပ်ရှ် လို့ခေါ်ပါတယ်။ အာရပ် or လီဘနီစ့် က အသုပ် တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီပေါ် အသီးအရွက်ကို အဓီက ထားပြီး သုပ်ကြတဲ့ အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေ တွေ အတွက် သိပ်မစိမ်းလှတဲ့ အသုပ် ပါပဲ။ ထူးဆန်းတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းဆိုလို့ စူမက်ခ် sumac or samak လို့ခေါ်တဲ့ အမူန့်တမျိုးပဲရှိတယ်။ဒါကလည်း ကြံလိုက်ရင် ရမယ်ထင်တယ်။ နောက်ဆုံး ၀ယ်မရရင် ဇီးမူန့်ကို သာ ထည့်ဗျာ။ အရသာ အတူတူလောက် ရှိတယ်။း)
အထက်မှာ ရေးထားတဲ့ cucumber , red raddish ကို စိတ်ကြိုက် လှီး ပါ။ ရေဆေးသန့်စင်ထားတဲ့ watercress , zata , mint အရွက်တွေ နဲ့ romaine အရွက်တွေကို ခွက်တခုထဲထည့်။ ခဏက စိတ်ကြိုက် လှီးထားတဲ့ cucumber,redraddish and tomato တွေကို ထည့်ပါ။ sumac powder နဲ့ lemon garlic dressing ကို အရသာအတွက် ထပ်ထည့်ပြီး ဖွဖွလေး နယ်ပေးပါ။ ကြော်ထားတဲ့ အာရပ် ပေါင်မုန့်ခြောက်ကိုအပေါ်က တင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အိမ်မှာ လုပ်စားချင်တယ်ဆိုရင် လွယ်မဲ့ အသီးအရွက် တွေကို ဇီးမူန့် ၊ ဆား ၊ ဆီ နဲ့ လီမွန် မရရင် သံပုရာပေါ့ ထည့်ပြီး စားကြည့်ဗျာ။
Posted by leo mark at 12:53 AM